Madaxweynaha Puntland oo la kulmay madax ka tirsan Imaaraadka Carabta | Goojacade
Home War Madaxweynaha Puntland oo la kulmay madax ka tirsan Imaaraadka Carabta
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay madax ka tirsan Imaaraadka Carabta
Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan dalka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa kulamo la qaatay mas’uuliyiinta Wasaaradda Ganacsiga Imaaraadka, Rugta ganacsiga Abu Dhabi iyo ganacsatada dalkaasi.
War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha kulankaasi ay ku wehelinaayey wasiirka wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Maalgashiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi, Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Maxamed Cabdi Cismaan (Majiino), Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Xuseen Cismaan Lugatuur (Gabiley) La taliyayaal sare oo ka tirsan Dowladda Puntland iyo saraakiisha madaxtooyada Puntland.
Kulanka ayaa sida war-saxaafadeedka lagu sheegay looga hadlay xoojinta xidhiidhka soo jireenka ah ee ganacsi iyo maalgashi ee ka dhexeeya Puntland iyo dalka Imaaraadka, waxaana si qotodheer looga wadahadlay arrimo la xidhiidha ganacsiga xoolaha, isku xirka Puntland iyo Imaaraadka ee dhinaca duulimaadyada, kobcinta ganacsiga labada dhinac iyo dhiiri-gelinta maalgashiga .
Madaxweynaha Puntland iyo wefdigiisa ayaa kulamo la qaatay rugta ganacsiga Abu Dhabi iyo ganacsatada dalkaasi, waxaana wafdiga Dowladda Puntland u soo bandhigeen ganacsatada dalkaasi fursadaha ganacsi ee Puntland ka jira iyo sidii loo xoojin lahaa ganacsiga labada dhinac.
Kulamada ayaa lagaga arrinsanayey iskaashiga ganacsi iyo midka wadashaqayneed ee labada dhinac ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ganacsiga iyo xoojintiisa oo ay ugu muhiimsanayd ganacsiga xolaha iyo dhoofintooda, waxayna kulamadaasi kusoo dhammaadeen is afgarad iyo wadashaqayn labada dhinac ah.
War-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in wefdiga madaxweynuhu inta ay halkaasi joogan ay kulamo kala duwan la qaadan doonan madaxda iyo ganacsatada dalka kaasi, kuwaasi oo loogu gogol-xaadhayo kobcinta xidhiidhka qotada dheer ee labada dhinac, midka maalgashi, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland iyo arrimo kale oo muhiim ah.
Previous articleRag xaasaska ragga kale uga furan jiray sixir oo lagu maxkamadeeyey Boosaaso
Next articleR/W Kheyre iyo la-taliyaha Donald Trump oo Aqalka Cad ku kulmay